Izidakamizwa okwanda bangangenwa yilesi sifo - imithombo Ngiwumqemane nokuphila kade
Ngenxa amasosha avikela ezifweni, umzimba wethu uyakwazi ukumelana amagciwane amaningi Amagciwane. Indoda ithola kusukela ekuzalweni kubazali babo Ukuvikelwa ebizwe amasosha omzimba athile. Nokho, amagciwane njalo mutating kubangele umzimba ukuba ukhiqize amasotsha omzimba amasha, okuholela uhlelo non-eqondile mzimba - ngabanye. Uma uhlelo olusha ukuzivikela isibe okunokwethenjelwa futhi ngamandla, zidinga ekhethekile "zokwakha". Lawa izidakamizwa ukuthuthukisa amasosha omzimba, ukudla okunempilo, ekuphileni okuvamile kwansuku zonke, ukulala okunempilo futhi eziningi nezinye izinto.
Izidakamizwa ukuthuthukisa amasosha omzimba
Phakathi izifo ezithile zonyaka noma ngemva umzimba ebusika eside kakhulu buthaka futhi sibhekana izifo ezihlukahlukene. Ngakho-ke, kulezi zikhathi kululekwa ukuthatha imithi ukuthuthukisa amasosha omzimba, ngokuvamile ezingasizi nokudla zidayiswa ngaphandle kadokotela.
Omunye imithi eminye esebenza ngempumelelo kakhulu zinomsuka virus. Bahlanganisa enzyme amagciwane eziqukethwe (streptococcus, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, kanye nabanye.), Ngimaphi Amagciwane enkulu yizifo eziyingozi. Uma emzimbeni, izinto ezifana ukuyithukuthelisa ukukhiqizwa inqwaba yamasosha omzimba, amasosha omzimba kanjalo kakhulu namandla. Leli qembu kuhlanganisa "Ribomunal", "Imudon", "Likopid" et al.
Futhi zikhuphuke esivikelo izidakamizwa uhlelo nge acid nucleic, njengokuthi "Derinat". Lezi amalungiselelo ukuthuthukisa amasosha omzimba has immunomodulating kakhulu, Lentulo, inkanuko futhi uya ngokuya ephulukisa izakhiwo.
Izenzo eziningi ezifanayo ezibhekwa izidakamizwa interferon. Bayakwazi hhayi kuphela akha nesivikelo esiqinile, kodwa futhi ukumisa ukuthuthukiswa izifo izigaba sokuqala lesi sifo. Leli qembu izidakamizwa zingahlukaniswa zibe subgroups ezimbili. Owokuqala uqukethe ekhethekile izinto eziphila abakhuthele elwa amagciwane ( "Grippferon", "Interferon Leukocytic") futhi umzimba yesibili kukhuthaza ukukhiqizwa kwe interferon siqu ( "Arbidol", "TSikloferon").
Okuvame kakhulu futhi iphephile kukhona izidakamizwa ukuthuthukisa amasosha omzimba, plant-based, ezifana "Immunal." Bahlanganisa ezikhishwe engokwemvelo amakhambi ehlukahlukene (Eleutherococcus, Echinacea, ginseng).
Imikhiqizo ukuthuthukisa amasosha omzimba
Kubalulekile futhi ukuze kwakhiwe amasosha avikela ezifweni futhi efanele Ukudla ukulinganisela. Ngakho, imikhiqizo abadliwa amafutha okuvela ezilwaneni kanye carbohydrate esindayo balimaze ezingaphezu kuka inzuzo. Ukuze uthuthukise ukungatheleleki ukuba kwanezela yakho ukudla Ukudla okune-fibre, amavithamini, amaphrotheni namafutha Lokudabuka zemifino.
imikhiqizo ukudla okusheshayo, nokudla okune semali nezivimbelakuvunda elimazayo nomthelela ongemuhle ukusebenza wonke umzimba omzimba ngokukhethekile.
Indlela yokuthuthukisa izivikeli mzimba esebenzisa ukuqina
Proper ukuqina komzimba kanjalo kusenta sibe nempilo enhle. Nokho, kule nqubo, ukuqinisa amasosha omzimba kufanele ukulandela imithetho ebalulekile. Kufanele kancane kancane lukhuni, yimuphi umthelela abukhali emzimbeni kungabangela umkhuhlane noma ukugula okungathí sina. Kumele kuqale ngamanzi afudumele futhi kancane kancane wehlise lokushisa. A ehlukile okuhle tempering - eshaweni Ngokuphambene, nakho kudinga ukungaguquguquki.
Ngaphezu kwakho konke lokhu okungenhla ukuze ukuqinisa amasosha omzimba kudingeka ngokuvivinya umzimba njalo, izizinda nsuku zonke futhi ukugijima emoyeni opholile, ukulala okunempilo, ukungabi ukucindezeleka futhi imikhuba emibi.
I-Cheesecake ye-Ducan: iresiphi
Kanjani ukuze ufunde ukuba sifake kwamagoda enhle ukwakha zezinwele eyinkimbinkimbi